Isan'ny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny famadihana, izay antsoina koa hoe famonosan-damba. Ny famadihana dia fety atokan'ny Malagasy hahatsiarovana ireo efa maty. Anehoana ny fifandraisana mbola misy eo amin'ny velona sy ny maty izy, izany hoe anehoana ny fanajàna sy fanomezana hasina ny razana. Atao amin'izany ihany koa ny fangataham-pitahiana amin'ny razana. Tsy vitan'ny hoe hahatsiarovana izy io, fa indrindra ahazoana miverina mikasika ireo efa maty. Fotoana ahazoan'ny fianakaviana mifankahita koa izy io.
1 Ny fomba atao mandritra ny famadihana
1.1 Fomba fikarakarana ny razana
1.2 Fanatanterahana ny lanonana
1.2.1 Ny mozika
1.2.2 Ny sakafo
1.2.3 Ny kaho-drazana
1.2.4 Ny fihaingona
2 Fotoana anaovana ny famadihana
2.1 Ny tompon'ny fanapahan-kevitra
2.2 Ny daty anaovana ny famadihana
3.1 Fomba fijerin' ny Kristiana
3.1.1 Fomba fijerin' ny Prôtestanta
3.1.2 Fomba fijerin' ny Katôlika
Ny fomba atao mandritra ny famadihanaHanova
Fomba fikarakarana ny razanaHanova
Betsaka ny fomba atao mandritra io famadihana io:
famerenana ny famonosana ireo maty, izany hoe averina fonosina lambamena izy ireo
fampidirana anaty fasana ireo faty nalevina anirotra (ny zazakely ohatra, satria raha zaza no maty dia tsy sokafana ny fasana fa alevina anirotra, izany hoe eo akaikin'ny fasana).
Fanatanterahana ny lanonanaHanova
Mampiavaka ny famadihana dia ny fisian'ny ny mozika, ny sakafo, ny kaho-drazana ary ny fihaingona.
Asaina ny mpiray tanana sy ny manodidona rehetra amin'ny sakafo. Any amin'ny toerana sasany dia antsoina mihitsy hoe "vary be menaka" na "vary be saosy" izy io, noho ny atiny: mamono omby na kisoa iray na maromaro mihitsy ny tompon-draharaha hamokisana ny olona, ary atao izay hampatavy ny sakafo, mba hahatsiarovan'ny olona ny tsirony
Ny kaho-drazana dia vola omen'ny olona nasaina ho an'ny tompom-pety.
Fahiny ihany koa dia,ny fotoanan'ny famadiana no fotoana ahitana ny fihaingona isankarazany (izany hoe manao akanjo vaovao daholo ny rehetra ka mampidera izay)
Fotoana anaovana ny famadihanaHanova
Ny tompon'ny fanapahan-kevitraHanova
Tsy tena misy daty voatokana hanaovana famadihana fa arakaraka ny hevitry ny raiamandreny ao amin'ny fianakaviana. Matetika dia ny iray amin'ireo raiamandreny no milaza hoe: "Nanonofy an-dranona (olona efa maty) aho halina, ka niteny izy hoe Mangatsiaka izahay"
Ny daty anaovana ny famadihanaHanova
Volana Jolay ka hatramin'ny Septambra no fotoana fanaovana famadihana. Ho an'ny Malagasy dia manomboka amin'ny vanim-potoana fararano no fanaovana famadihana, handaniam-bola aman-karena mihitsy mantsy ny famadihana ka dia nosafidian'ny Malagasy hanaovana izany ny vanimpotoana fiakaran'ny voka-bary (fararano, main-tany). Mila andro tsara ny famadihana ka nosafigina ny main-tany izay tsy misy orana, maina rahateo ny andro amin'io vanimpotoana fararano io.
Fomba fijerin' ny KristianaHanova
Fomba fijerin' ny PrôtestantaHanova
Ny fivavahana kristianina sasany, indrindra indrindra ny prôtestanta dia manambara ny famadihana ho fomba iray mifanipaka amin' ny fanompoana an' Andriamanitra. Heverin' izy ireo ho isan' ny fanompoan-tsampy ny famadihana noho izy ataony hoe fivavahana amin' ny razana. Ny karazana mpivavaka sasany toy ny mpiandry dia tsy mahazo mandray anjara amin' ny famadihana mihitsy.
Fomba fijerin' ny KatôlikaHanova
Fanahin' ny vatana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Famadihana&oldid=1011171"
Dernière modification le 12 Mey 2021, à 03:55
Voaova farany tamin'ny 12 Mey 2021 amin'ny 03:55 ity pejy ity.